Ezinye izindlela zeTeamViewer zosizo olukude 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
ITeamViewer ngokungangabazeki uhlelo olusetshenziswa kakhulu kude kunawo wonke emhlabeni, futhi ngenxa yokusebenza kwalo okuhlukile kuzo zonke izimo zenethiwekhi (noma kumanethiwekhi we-ADSL ahamba kancane asebenza ngaphandle kwezinkinga) futhi ngenxa yemisebenzi eminingi eyengeziwe njengokuhanjiswa kwefayela okude. nokuvuselelwa okuzenzakalelayo okukude (okuwusizo ekuvuseleleni uhlelo nakuma-PC wabasebenzisi be-novice). Ngeshwa, noma kunjalo Inguqulo yamahhala ye-TeamViewer unemikhawulo emikhulu: akunakwenzeka ukuyisebenzisa endaweni yezentengiselwano, kwenziwa uhlobo lokuhlola uxhumano (ukuqinisekisa ukuthi singabasebenzisi abazimele) futhi akunakwenzeka ukwenza kusebenze inkomfa yevidiyo noma iphrinta ekude ngaphandle kokusebenzisa ilayisensi yomsebenzisi.
Uma sifuna ukunikela ngosizo olukude noma ukusiza inkampani yethu ngaphandle kokukhokha noma yiliphi inani lemali, kulo mhlahlandlela sizokukhombisa ezinye izindlela ezingcono kakhulu zeTeamViewer zosizo kude, ngakho-ke ungalawula noma iyiphi ikhompyutha ukude ngaphandle kwesikhathi noma isikhathi.
FUNDA NONKE: Izinhlelo zedeskithophu ezikude ukuxhuma ukude kukhompyutha
Izindlela ezihamba phambili zeTeamViewer
Izinsizakalo esizokukhombisa zona zingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo, kufaka phakathi uchwepheshe: lapho-ke singalawula ama-PC kude futhi nikeza ngosizo lobuchwepheshe ngaphandle kokukhokha i-euro. Lezi zinsizakalo nazo zinokulinganiselwa (ikakhulukazi kuzici ezithuthukile) kepha akukho okuvimba ukuvikelwa Ukuze kube lula sizokukhombisa kuphela izinsizakalo ezethulwayo njengokulula ukumiswa njenge-TeamViewer ngisho nakubasebenzisi abanolwazi oluncane (kusukela kuleli phuzu, iTeamViewer isengumholi wemboni).
Enye indlela engcono kakhulu yeTeamViewer ongayisebenzisa njengamanje I-desktop desktop ye-Chrome, esetshenziswa ngokulanda i-Google Chrome kuwo wonke ama-PC bese ufaka zombili ingxenye yeseva (kwi-PC ezolawulwa) nengxenye yeklayenti (kwi-PC yethu esizonikeza ngayo usizo).
Singalungiselela ngokushesha usizo lwerimothi nge-Chrome Remote Desktop ngokufaka isengezo sesiphequluli (sivula isiza seseva bese siyacindezela Faka ku-pc), ukukopisha ikhodi eyingqayizivele ekhiqizelwe leli qembu futhi, kusiyisa ekhasini lekhasimende ethimbeni lethu, sifaka ikhodi. Ekupheleni kokusetha, sizokwazi ukuhlola ideskithophu ukunikeza usizo ngokushesha futhi ngokushesha! Singafaka futhi ingxenye yeseva kuma-PC amaningi bese siyigcina ekhasini lethu lokusekela ngaphansi kwamagama ahlukahlukene, ukuze sikwazi ukulawula amakhompyutha amabili noma ngaphezulu ngaphandle kwezinkinga. Ideskithophu Ekude ye-Chrome nayo ingasetshenziswa kusuka ku-smartphone, njengoba kubonakala kumhlahlandlela Ideskithophu Ekude ye-Chrome ngomakhalekhukhwini (i-Android ne-iPhone).
Iperius ideskithophu ekude
Omunye umlandi wamahhala wokunikeza usizo olukude yi Iperius ideskithophu ekude, itholakala njengewukuphela kwesoftware ekhasini elisemthethweni lokulanda.
Lolu hlelo luyaphatheka kalula, vele uqalise okusebenzisekayo ukuze ngokushesha isikhombimsebenzisi se-server kanye nekhasimende silungele ukusisebenzisa. Ukwenza ukuxhumana okukude, qala uhlelo ku-PC oluzolawulwa, khetha iphasiwedi elula emkhakheni wegama elifanayo, ukopishe noma masikutshele ikhodi yezinombolo ekhona phezulu bese uyifaka kwi-Iperius Remote Desktop eqale kukhompyutha yethu, ngaphansi kwesihloko I-ID yokuxhuma; Manje sicindezela inkinobho ethi Xhuma bese ufaka iphasiwedi, ukuze ukwazi ukulawula kude ideskithophu futhi unikeze usizo oludingekayo. Uhlelo lusivumela ukuba sibambe ngekhanda omazisi esixhuma kubo futhi sinikeze zonke izinketho zokufinyelela ezingabhekiwe (ukukhetha iphasiwedi yokungena ngaphambi kwesikhathi): ngale ndlela kwanele ukuqala uhlelo ngokuzenzekelayo ukuze unikeze usizo ngokushesha.
Ukusekelwa okusheshayo kwe-Microsoft
Uma sine-PC ene-Windows 10 singasebenzisa ngokunenzuzo uhlelo lokusebenza Usizo olusheshayo, etholakala kwimenyu yokuqala ezansi kwesobunxele (vele ubheke igama).
Ukusebenzisa leli thuluzi kulula kakhulu: sivula uhlelo lokusebenza kwikhompyutha yethu, chofoza Siza omunye umuntu, ngena nge-akhawunti ye-Microsoft (uma singenayo singayakha ngendiza mahhala), futhi siqaphele ikhodi yenkampani ephethe kuhlinzekiwe. Manje ake siye kwikhompyutha yomuntu ozohanjelwa, uvule uhlelo lwe-Quick Assistance bese ufaka ikhodi yethu yokusebenza: ngale ndlela sizoba nokulawula okugcwele kwedeski futhi sinikeze noma yiluphi uhlobo losizo, ngaphandle komkhawulo wesikhathi. Le ndlela ihlanganisa ijubane le-RDP nokusebenziseka kalula kweTeamViewer, ikwenze kube yifayela le- ithuluzi elinconywe yi-Navigaweb.net.
Uma sinamakhompyutha amaningi anezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zokulawula ukude, okuwukuphela kwesixazululo somthombo ovulekile ngokuphelele futhi esivulekile esingabheja kuso Umsebenzi we-DWService, okulungisekayo ngqo kusuka kuwebhusayithi esemthethweni.
Le sevisi ingasetshenziswa ngqo kusuka kusiphequluli, okungenani kulabo abanikeza usizo. Ukuqhubeka silanda ifayela le- DWAgent kukhompyutha (noma kumakhompyutha) ozosizwa, uyiqale kanye ne-PC bese uqaphela i-ID nephasiwedi edingekayo ekuxhumekeni; Manje ake siye kwikhompyutha yethu, ake sakhe i-akhawunti yamahhala esizeni osibona ngenhla, bese ufaka ikhompyutha nge-ID nephasiwedi. Kusukela manje kuqhubeke, sizokwazi ukuhlinzeka ngosizo ngokuvula noma isiphi isiphequluli nokungena ku-akhawunti yethu, lapho kuzobonakala khona amakhompuyutha akude. Njengoba iseva ingafakwa kuWindows, Mac nakuLinux I-DWService iyindlela engcono kakhulu yezinkampani ezinkulu noma kulabo abanamakhompyutha amaningi.
Uma sifuna ukuhlinzeka ngosizo olulula olukude kubangani noma emndenini singasebenzisa futhi insizakalo eliyinikezayo I-UltraViewer, itholakala kuwebhusayithi esemthethweni.
Singayibheka le nsizakalo njengeyodwa Uhlobo lwe-TeamViewer lite, ngoba ine-interface efanayo kakhulu nendlela yokuxhuma efanayo. Ukuyisebenzisa, empeleni, qala nje kukhompyutha ezolawulwa, ukopishe i-ID nephasiwedi bese uyifaka kusixhumi esibonakalayo sohlelo kukhompyutha yomsizi, ukuze ukwazi ukulawula ideskithophu ukude ngendlela ewuketshezi futhi ngaphandle kokukhangisa windows noma izimemo zokushintshela ku-Pro Version (yonke imikhawulo ye-TeamViewer eyaziwayo).
Akukho ukushoda kwezinye izindlela kwi-TeamViewer futhi futhi kulula ukuzisebenzisa nokuzilungiselela, ngisho nabasebenzisi be-novice abanalolu hlobo lwesoftware (empeleni, xhumana i-ID yakho ne-password kumsizi wethu okude ukuze aqhubeke). Izinsizakalo esikukhombise zona zingasetshenziswa futhi endaweni enobungcweti (ngaphandle kwe-UltraViewer, ekhululekile ukuyisebenzisela yona kuphela), inikeze enye indlela evumelekile yelayisense elibizayo leTeamViewer lebhizinisi.
Ukuthola eminye imininingwane ngezinhlelo zosizo ezikude, sikumema ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Ungayivula kanjani i-PC ukude ukuze isebenze ukude mi Ungayilawula kanjani ikhompyutha kwi-Intanethi ukude.
Uma kunalokho sifuna ukulawula kude iMac noma iMacBook, singafunda i-athikili yethu Ungasilawula kanjani isikrini seMac ukude.
I-LibreOffice Calc: enye indlela engcono kakhulu ye-Excel
Ungalivula kanjani ifayela le-CSV kahle
Ungazilungisa kanjani izilungiselelo ze-webcam (ukungafani nokukhanya) kwi-Windows PC
Ungasifaka kanjani i-Zoom uma wamukela isimemo
Vela kwinkomfa yevidiyo nge-3D avatar ehamba njengathi
Ifu elihle lamahhala lokugcina amafayela ku-inthanethi
Faka umthetho esikrinini sakho se-PC
Guqula iMKV ibe yi-AVI noma ishise i-MKV ibe yi-DVD
Dala izithombe zephaneli kanye nezithombe ezingama-360-degree online ku-PC yakho
Hlanganisa umculo kwi-PC nezinhlelo zamahhala ze-DJ
Vikela ideskithophu yakho ye-PC: amaphephadonga anama-collage wesithombe, isikrini se-3D namawijethi
I-Virtual 3D microscope online futhi ikhululekile ukulanda kukhompyutha yakho